Amahora Ezimakethe Zezimakethe | I-FXCC
Ikhaya / Ukuhweba / Ama-forex Amathuluzi / Amahora Ezimakethe Zezimakethe
Ithebula lehora le-Forex Market
Ithebula le-FX yamahora emakethe liyinto elula, elula ukuyibuka, imephu yokushisa kwevolumu, ekhombisa ngokushesha ngosuku lonke lokuhweba, yiziphi izimakethe ezivulekile futhi ezivaliwe.
Kungani amahora emakethe ithuluzi kubalulekile?
Thatha imininingwane ecacile nebonakalayo mayelana namahora wokuthengisa emakethe
Thola izikhathi zokuhweba ezinhle zosuku olulungele izinhlelo zakho zokuhweba
Thola izikhathi ezinamathuba aphezulu emakethe
Gwema ukushaqeka kwamakethe okungaholela ekulahlekelweni okungadingekile nokungalindelekile
Awekho izibalo eziyinkimbinkimbi ezidingekayo ukunquma ukuthi i-London ivula noma i-New York ivaliwe, okubukwayo okucacile kunikeza ulwazi. Abathengisi manje bangazibona izikhathi zokuhweba ezihle kakhulu zosuku oluhambisana namasu abo okuhweba, mhlawumbe izinkathi ezinamathuba aphezulu emakethe. Abathengisi bangakugwema ukuthungwa kwemakethe, njengoba ukuvula imakethe ngokuvamile kuvame ukunyakaza okuphawulekayo okungaholela ekulahlekelweni okungadingekile nokungalindelekile.